XOG:- Shirkii ugu dambeeyay ee madasha oo la filaayo in maalinta berri ah uu ka furmo magaalada Muqdisho – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
XOG:- Shirkii ugu dambeeyay ee madasha oo la filaayo in maalinta berri ah uu ka furmo magaalada Muqdisho
Ilo xog-ogaal ah aynu ka heleyno xarunta madaxtooyadda Villa Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in shirkii madaxda madasha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed oo hore loo qorsheeyay inuu dhaco 7-da bishaan September uu furman doono maalinta berri oo Isniin ah.
Sababta maalinta berri ah looga dhigay shirkaasi ayaa la sheegayaa inay tahay in dhawaantaan uu magaalada Muqdisho ka furman doonno shir madaxeedka IGAD oo qorshihiisu yahay inuu qabsoomo 10-ka bishaan aynu ku jirno ee September.
Shirka madaxda madasha wadatashiga qaranka Soomaaliyeed ayaa la sheegay inuu noqon doono midkii ugu dambeeyay oo ay yeeshaan madaxda shirkaasi, waxaana sida la sheegay shirkaasi looga hadli doonaa arrimaha doorashoooyinka dalka.
Dhinaca kale, waxaa la filayaa in madaxda maamul goboleedyadda dalka ee ka qeyb gali doonta shirkaasi ay maalinta berri ah soo gaari doonaan magaalada Muqdisho, si ay uga qeyb galaan shirkaas.
Waxaa sidoo kale si aad ah loo adkeeyay ammaanka magaalada Muqdisho, iyadoona ay jiraan warar sheegaya in Al-shabaab ay dooneyso inay carqaladeeyaan shirarkaasi, balse hay’adda nabad-sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee NISA oo arrinkaasi ka warheshay ayaa ku dadaalaysa inay ka hortagto weerarka Al-shabaab.